Alahady 05 Janoary 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 05 JANOARY 2020 - ALAHADIN’NY TAOM-BAOVAO
"MANEHO NY TANA-MAHERINY NY TOMPO ANDRIAMANITRA"
“...ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy...” : Jaona 10 : 24-30
Ny Tompo Andriamanintsika dia Andriamanitra be fitiavana sady be faharim-po ka izany no isaorantsika sy hiderantsika Azy. Nomeny ity taona vaovao 2020 ity isika fa izy no nitantana antsika tamin’ny tana-maheriny koa deraina sy ankalazaina anie ny Anarany Masina. Ity no Alahady voalohany amin’ity taona vaovao 2020 ity. Alahadin’ny Epifania izay manambara sy maneho fa mamangy ny olony, Andriamanitra. Lohahevitra vaovao no hobanjin’ny Fiangonana ao anatin’ity volana Janoary ity dia ny hoe : “MANEHO NY TANA-MAHERINY NY TOMPO ANDRIAMANITRA” .
Ny mpitandrina RAZAFINARIVO ANDRIANTSILAVINA Nofy , izay miofana sy miana-draharaha eto amin’ny Fiangonana no nitarika ny fanompoam-pivavahana ka ny litorjia voalohany fampiasa eto anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara no notanterahina . Ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina kosa no nitory ny tenin’Andriamanitra. Tamin’ny fanatanterahana ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo dia niara-nisalahy nanatanteraka izany ireo mpitandrina mirahalahy mianaka ireo.
Nisy ny fiarahabana ireo rehetra izay nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahany tamin’iny volana Desambra lasa teo iny. Miisa 71 mianaka izy ireo no tonga nanatanteraka ny raki-pisaorana teo amin’ny alitara masina.
Fararanom-piarahabana moa ny andro androany ka teo ihany koa ny fiarahabana ireo Zokiolona izay nahatratra 70 taona noho mihoatra. Soritana manokana etoana ihany koa ny fiarahaban’ny fiangonana ny mpitandrina mivady sy Ramatoa RAMINO Vololona Razafindramanga, noho ny fahatrarana izao taona vaovao izao.
Ny Sampana Mpiangaly Zavamaneno niaraka tamin’ny mpitendry Orga , Atoa Philippe RAJAOFETRA no nitarika ny Fiangonana tamin’ny fitarihana ny hira . Tamin’ny fiarahabana Apostolika dia nomarihan’ny mpitarika ny maha-alahadin’ny Epifania ny andro androany.
Ny Salamo faha 89 and. 8,9,11,13 ary ny 14 no nentina niderana sy nisaorana an’Andriamanitra. : “ Jehovah, Andriamanitry ny maro, ô, iza no mahery tahaka Anao, Jehovah? Ary manodidina Anao ny fahamarinanao. Hianao manapaka ny fisavoan’ny ranomasina; Raha manonja ny alony, dia mampitsahatra azy Hianao. Anao ny lanitra, Anao koa ny tany; Izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Hianao no nanorina azy. Manan-tsandry mahery Hianao; Mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana. Rariny sy fitsarana no fanorenan’ny seza fiandriananao; Famindram-po sy fahamarinana no mialoha ny tavanao.” Amen !
Ny hira faha 746 “Mifalia ry sakaiza” no hira nanombohana izao fanompoam-pivavahana izao ho fiderana sy fisaoraa ny Tompo Andriamanitra noho ny taona vaovao izay nomeny.
“Ry ankehitriny sy taloha ary ho avy o, Andriamanitra izay ivavahanay, Andriamanitra mahery izay mitondra ny fiainanay, mitahy anay ka mahatonga anay ho tonga amin’izao taona 2020 izao. Misaotra Anao izahay noho ny fitantananao ny fiainanay ka tafavory eto an-kianjanao, eto amin’izao vavahadin’ny lanitra izao, hidera Anao, hanome voninahitra Anao, hankalaza ny Anaranao, satria Ianao tokoano mendrika ny dera, ny saotra ary Anao ny Hery sy ny Laza. Andriamanitra o! Mangataka izahay ankehitriny,ny hamenonao anay amin’ny alalan’ny fanahinao masina mba ankatia aminay, ahatonga anay ho tena hiombona amin’ny fifaliana ka ahitanay fa manentana anay eto tokoa ianao Andriamanitra, izany o fanirinay ary ataoanay izany vavaka izany amin’ny Anaranao Jesoa Kristy. Amen!”
Taorian’izany dia natao ny hira 747 and. 1 “Haleloia! Sambasamba”
Izao no sitrapon’Andriamanitra nambara tamin’ny Fiangonana : Hoy ny Tompo : Nanatona ianareo ka mihainoa ahy. Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona fa manome ny fahasoavana ho an’ny manetry tena koa manetre tena eo ambany tanamaherin’Andriamanitra mba hanandratany anareo amin’ny fotoan’andro. Amen . (Isaia 48:16, 1 Petera 5:5,6)
Eo anatrehan’ny Sitrapon’Andriamanitra dia tsy nahatanteraka isika ka andeha hifona sy hibebaka amin’izao vavaka izao : “ Ry Tompo Andriamanitray o!, ny sitraponao dia miantso anay mba hanatona Anao. Indrisy anefa Andriamanitra o! Raha ny zavatra vitanay sy ny ataonay dia toa manalavitra anao kosa izahay. Ny teninao dia manambara aminay hoe mihainoa, nefa izahay manentsi-tadiny ka tsy vonon-kihaino Anao. Nambara taminay fa tokony isikina fanetren-tena izahay, tokony hifanompo ,, satria Ianao dia manohitra ny miavonavona fa manome fahasoavana ny manetry tena. Manentana anay ianao ny mba hanetrenenay tena eo ambany tana-maherinao ka hasandratrao amin’ny fotoan’andro. Indreto izahay mibebaka sy mifona manoloana Anao fa tsy nahatanteraka ny sitraponao. Hibebahanay tsirairay amin’ny vavaka mangina ny fahotanay fa ny Andriamanitra ivavahanay dia mpamela heloka koa raisinay amim-pinoana ny famelankeloka atolotrao anay . Misaotra Tompo noho ny famelanao ny helokay ary indro izahay ankehitriny , vonona ny hiroso hatrany eo ambany ny tana-maherinao. Amin’ny Anaranao Jesoa no anaovanay izany vavaka izany . Amen!”
Ny hira FFPM 742 : 3 “Mamindrà fo Zanahary” no nohiraina ho fifonana amin’ny Tompo.
Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina ny Tompo ka mamela ny fahadisoantsika. Raiso am-pifaliana ny teny famelan-keloka izay hambaran’ny Tompo aminao ankehiriny: “Satria nino hanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, Izaho efa nihaino anao , noho ny anarako dia ononiko ny fahatezerako , ary mba hiderana Ahy dia manindry fo aminao aho. Aza matahotra, minoa fotsiny ihany , voavela ny helokareo noho ny Anarany Masina , Haleloia ! Amen”
Taorian’ny fandraisana ny famelankeloka dia nohiraina ny hiran’ny Finoana FFPM 487 and. 2 “Ny fiainako be siasia taloha” ary rehefa izany dia natao ny fanekem-pinoana laharaha voalohany.
I Zoky Hanitra Rafidison no nanatanteraka izany. Ny Petera 5:6-7 no nanompanany ny hafatra : “ Koa amin’izany manetre tena ambanin’ny tàna-maherin’Andriamanitra, mba hanandratany anareo amin’ny fotoan’andro;ary apetraho aminy ny fanahianareo rehetra; fa Izy no miahy anareo”. Apetraho eo ambany tana-maherin’Andriamanitra ny ankohonanao, ny tokantranonano ny asa fitadiavanao sy ny fikasanao rehetra na ny fianaranao, ny asa fanomponao sy ny momba anao rehetra fa tsy misy tsy hain’Andramanitra atao.
Taorian’izany hafatra izany dia nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ny hira 761 and. 1 “ Ry jesoa zoky be fitia”. Nisy ny vavaka izay nanambarana fa hay: tena mana-danja eo imason’Andriamanitra isika tsirairay avy ka indreto ary isika manaiky hotefena sy hovolavolain’Andriamanitra araka ny sitrapony.
Mialoha ny fanambarana ny raharahan’ny Fiangonana dia nanatontosa ny anajara hirany ny Sampana Taninketsa tamin’ny alalan’ny hira hoe : “BENIS SOIT LE SEIGNEUR”
Ratoa RAKOTOMANANA Andrimbazotiana no nanatanteraka izany. Ny Jaona 10 : 18 no nentiny niarahaba ny mpianakavin’ny finoana sy nentiny nanombohana ny fanambarana ny asan’ny fiangonana.
Toa izao no vinan’ny Fiangonana mandriatra ity taona 2020 ity :
Amparibe Famonjena – Mahatahiry ny Finoana – Mifankatia – Miasa amin’ny fahazotoana.
Notanterahina anio tao amin’ny FLM Ambatovinaky ny fanompoam-pivavahana fifanolorana andraikitra eo anivon’ny FFPM eo amin’ny Mpitandrina Irako Andriamahazosoa filohan’ny FFPM teo aloha sy ny Pastora Rakotonirina David ,filoha ankehitriny.
Hotanterahina eny amin’ny Coliseum Antsonjobe ny Alahady faha 19 Janoary 2020 ny fanompoam-pivavahana fanamarihana ny taom-piasana 2020 sady fiarahabana ny filohan’ny FJKM. Ny fanomboan’ny fanompoam-pivavahana dia amin’ny 10 ora maraina. Entanina isika mpianakavin’ny finoana hanatrika izany.
Ny fidirana ao amin’ny SETELA dia ny Sabotsy 25 jaonary 2020 amin’ny 2.30 ora ao amin’ny faculté de théologie Ambanakanga
Araka ny vinan’ny Fiangonana dia hanatanteraka fitoriana filazantsara isan-tokantrano ny Fiangonana amin’ity taona ity izay antsoina hoe FITO ANTOKA. Ny mpitandina sy ny AFF no mitarika izany asa izany miaraka amin’ny Diakona sy ny Loholona.
Ny fanombohana izany dia ny Alakamisy 16 janoary 2020. Ny zoma 10 janoary ho avy izao amin’ ny 6.15 ora hariva no fanombohana ny fiofanana ho an’ireo sehatra sy rafitra rehetra voakasika amin’ny asa FITO ANTOKA.
Hanomboka ny 25 janoary ho avy izao ny taom-pankalazana ny faha 50 taonan’ny Hasin’ny Famonjena.
Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny tombon’androm-pahavelomana nomeny ny Fiangonana
– Nampahatsiahy sy nanentana ny Fiangonana amin’ny fanompoam-pivavahana izay tontosaina ny 19 Janoary eny Antsonjobe.
– Notanteraka ny fifampiarahabany ihany koa ny mpianakavin’ny finoana izay anantrika ny fanompoam-pivavahana androany ka ny teny nifampiarahabana dia araka izay hita ao amin’ny Deotoronomia 33 : 13-16 : “ Hotahin’i Jehovah anie ny taninareo Amin’ny zava-tsoan’ny lanitra, dia amin’ny ando, Ary amin’ny rano lalina mamitsaka any ambany, Ary amin’ny zava-tsoa vokatry ny masoandro Sy ny voan-javatra soa vokatry ny volana, Ary amin’ny zava-malaza avy amin’ny tendrombohitra fahagola Sy ny zava-tsoa avy amin’ny havoana mandrakizay Mbamin’ny zava-tsoan’ny tany sy izay rehetra eo aminy Sy ny fankasitrahan’Izay nitoetra tao amin’ilay roimemy;”
FIARAHABANA IREO NAHATRATRA NY TSINGERIN-TAONA NAHATERAHANY
Niarahaba ireo nahatratra ny tsingerin-taona nahaterany tamin’iny volana Desambra lasa iny ny fiangonana. Nisy ny tenin’ny Soratra Masina nentina niarahaba azy ireo dia araka izay hita ao amin’ny Genesisy 15 : 1 “Aza matahotra ; Izaho no ampinganao sy valim-pitia lehibe indrindra ho anao.” Nanatanteraka vavaka ho azy ireo ny fiangonana ary rehefa izany dia nanao ny rakitra teny amin’ny Alitara, izy 71 mianaka izay nahatratra izao tsingerin-taona izao.
Ny teny nentina niarahaba ireto Zokiolona ireto dia araka ny Joba 36: 11 ary ny Matio 5:48. Taorian’ny fanomezana ny tenin’Andriamanitra dia nanao vavaka fisaorana an’Andriamanitra ny Fiangonana noho ny fananana ireto ray aman-dreny zokiolona ireto ary koa nanao vavaka fangataham-pitahiana ho azy ireo .Rehefa izany dia noredoninireo zokiolona ny Hira 479 “ Jesoa no anjarasoa” ary taorian’izany dia notolorana mari-pifaliana sy fandraisan-tanana izy ireo.
Ny Biraon’ny Fiangonana Tantely Andriamasinoro no namaky izany. Ireto no hira nangatahan’ny Mpianakavin’ny Finoana izay nanatanteraka ny Voady sy raki-pisaorana : Hiran’ny RFF “Ampianaro aho Tompo” / Hiran’ny Hasin’ny Famonjena “Isaotra an’i Jehovah lalandava aho” / FFPM 549 : 1 / FFPM 432 : 1 / FFPM 760 : 1 / FFPM 631 : 1:
Nisy ny loham-pianakaviana nisaotra ny Tompo, mangata-bavaka ho an’ny asa fivelomana sy ny fiainan’ny ankizy rehetra.
Tao ny nisaotra ny Tompo noho ny tsigerintaonam-panambadiana
Tao ny nangata-bavaka amin’ny asa fivelomana , ny fanaovan-trano, ny fianaran’ny ankizy , ny asa fanompoana.
Tao no nisaotra ny Tompo noho ny nataony tamin’ny fiainan’ny mpanompony tamin’iny taona lasa iny.
Tao no nanome ny fahafolon-karenany
Tao ny mangata-bavaka mba ahitany asa
Tao no nisaotra ny Tompo noho ny taona vaovao ary nangata-bavaka ho an’ny zandriny eo andalam-pitadiavana eo amin’ny asa.
Fanolorana ny Rakitra Hira 276 : 3 “O! Mba raiso re ry Tompo”
Ramatoa Bodo RAHARIJAONA vadin’ny Mpitandrina no nitari-bavaka ary namaky ny perikopa manontolo. Ny Testamenta Taloha dia araka izay hita ao amin’ny Isaia 48: 12-16. Ny Testament Vaovao kosa dia araka izay hita ao amin’ny Jaona 10: 24–30 ary ny epistily dia ny Asa 12:1-10.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra. Ny teny araka ny Jaona 10 : 24-30 no nanompanany ny hafatra nentiny ho an’ny Fiangonana ho amin’izao taom-baovao izao.
Raha mijery ity perikopa araka ny Jaona 10:24-30 ity isika dia liana ary te- ahazo antoka ny amin’izay fiheverany an’i Jesoa , ny Jiosy , na io Jesoa io tokoa no Kristy na tsia. Zavatra roa no ao an-tsain’ny Jiosy amin’izany:- Raha Izy tokoa no Kristy ?. Ahoana moa no tsy hinoana Azy ? Saingy ny olana dia ity; ny fianakaviany, ny mpiray tam-po aminy, ny olona rehetra sy ny Ray amandreniny aza dia fantatra teo an-tanàna, ka ahoana indray no hinoana ny maha-kristy azy? – Raha manambara ny tenany anefa ny Tompo fa Izy tokoa no Kristy dia azo atao ny miapanga Azy satria efa nanambara ny tenany Izy ka azo samborina amin’izany fanambaràna izany. Arakaraky ny nanambaran’i Jesoa ny tenany no voa maika nampahatezitra ireto Jiosy ireto. Eto amin’ity perikopa ity dia tezitra ny Jiosy ka saika hitora-bato Azy (and.31).
Ity tenin’ny Soratra Masina voalahatra anio ity dia milaza ny tendry mialoha roa sosona na ny DOUBLE PREDESTINATION satria hita miavaka tsara eto ny Ondrin”ny Tompo sy ny TSY Ondrin’ny Tompo. Ny ondrin’ny Tompo dia miaino ny feony ary mahalala Azy fa ny tsy ondrin”ny Tompo kosa dia tafintohina amin’izay haambaran’i Jesoa. Ny ondrin’ny Tompo dia omen’ny Tompo fiainana mandrakizay fa izay tsy an’ny Tompo dia tsy manana ny fiainana mandrakizay.
1-	MIHAINO NY FEONY NY ONDRIN’NY TOMPO
Ao amin’ny Jaona 6:37, 44,45 dia ahitana fa izay omen’ny Ray an’i Jesoa no manatona Azy. Tsy misy olona mahay manatona an’i Jesoa raha tsy notaomin’ny Ray izay naniraka ny Tompo. Mazava araka izany fa rehefa tsy notaomin’ny Ray dia tsy afaka manaraka ny Tompo. Izay rehetra mandre ka mianatra amin’ny Ray no manatona ny Tompo. Ny ankoatra izay izany dia tsy avy amin’ny Ray ka tsy manana anjara amin’i Jesoa. Ireo izay nantsoina ihany no afaka mandray sy manaiky ny fampianaran’ny Tompo. Ireo no mahalala ny asa sy ny famantarana nataon’ny Tompo.
Ry Havana, ny tena hafatra dia izao : Ny ondrin’i Jesoa Kristy dia omeny tombon-dahiny eo amin’ny fiainana. Hitantsika sy azo raisina an’ohatra amin’izany ny nitranga tampin’i Petera raha voatana tao an-tranomaizina izy nefa dia nivoaka tao am-pigadrana tamin’ny fitahiana mahatretrika izy. Ny anjelin’ny Tompo no namoaka azy.
Ho antsika Mpianakavin”ny Finoana dia hamporisihana isika hiaina ny Vina fa izao no hitantsika ao : “Amparibe Famonjena – Mahatahiry ny Finoana – Mifankatia – Miasa amin’ny fahazotoana.” Izany vina izany dia tsy natao ho tsianjery fotsiny fa tena manomana fiainana ho ahy sy ho anao, mba ahatonga ny fiainantsika ho ao anatin’ny fiombonana sy amin’ny fanompoana satria mpianatry ny Tompo isika, Ondrin’ny Tompo isika ka ny Fiangonana no vala hitehirizana antsika.
2-	OMEN’NY TOMPO FIAINANA MANDRAKIZAY NY AZY
Ny fiainana mandrakizay dia tsy andrasana ao aorian’ny fahafatesana akory fa dieny izao mbola miaina eto an-tany isika dia efa santarintsika izay mpanara-dia ny Tompo izany fiainana mandrakizay izany. Ny Fiainana mandrakizay dia i Jesoa Kristy velona ao anatintsika. Fa hoy ny Tompo Izao no fiainana, Izy no isiam-piainana. Tsy misy maharonbaka izay eo am-pelatanan’ny Ray satria ny Ray dia lehibe noho izy rehetra. Manambara izany fa azo antoka izay hambaran’ny Tompo fa ny fiainana mandrakizay izay atolotry ny Tompo antsika dia tsy misy afaka manaisotra izany satria efa ao amin’ny Tompo isika.
Isika ry havana dia mahatsiaro fa manana fahalemena ihany sy tsy fahatanterahana. Mety ho solafaka kanefa izao ; ny ondrin’ny Tompo dia ONDRINY. Tsy misy aharombaka anao, adidiny ianao. Eo amin’izay rehetra zava-dratsy manakantsakana ny fiainanao dia miditra an-tsehatra Andriamanitra ka mandevona sy manapotika ireny. Andriamanitra dia mamoaka antsika ho mpandresy sy mamoaka antsika ho amin’ny fitahiana mahatretrika satria efa nomeny antsika ny fiainana mandrakizay.
ASA VAVOLOMBELONA - FIARAHABANA NY MPITANDRINA
Tamin’ity fotoana ity no niarahabana ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina mivady sy ny ankohonany noho ny fahatrana izao taona vaovao izao. Ny Biraom-piangonana RAZAFIMAHARO Mamy no nisolotena ny Fiangonana ka miarahaba azy ireo sy nanao ny teny firariantsoa. Ny Birao, Andry RAKOTOMANANA kosa no nitari-bavaka. Noharabaina niaraka tamin’ny Mpitandrina ihany koa moa Ratoa RAMINO Vololona izay vady navelan’ny Mpitandrina RAMINO Paul ary izy kosa no nitondra ny teny fisaorana ho an’ny Fiangonana.
Mialoha ny vavaka fangatahana dia nanatanteraka ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena tamin’ny alalan’ilay hira hoe : “Avia hifandahatra” , hira noforonin’i RANAIVO Ranarivelo. Rehefa izany dia natao ny hira FFPM 748 :1 mialoha ny Tondrozotra. Natao ny famakiana ny Tondrozotra ary rehefa izany dia natolotra ny Tsodrano. Nofaranana tamin’ny fihirana ny hira FFPM 748 and 2. Izao fanompoam-pivavahana izao ary taorian’izany dia niatrika ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo ny Fiangonana.
NY FANDRAISANA NY FANASAN'NY TOMPO
Teo amin’ny fafana dia Tovohery RABAKO Tovohery. Ny niandraikitra ny fanamafisam-peo dia Jonathan RABEMANANORO , Rova HARENTSOA no naka ny Sary ary Jonathan RABEMANANORO no naka ny feo.
Nandray an-tsoratra: Rabako Tovohery – Naka ny sary: Harentsoa Rova.